ဖက်ရှင် Sneaker ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Fashion Sneaker Factory
အမျိုးသားစီးဇာဖိနပ်ကဲ့သို့ဖိနပ်များ၊ Breathable Fashion Sneaker လက်ဝတ်ရတနာများရောင်းရန်အတွက်အမျိုးသားဖက်ရှင်စနီကာများ
မင်းရဲ့ပွဲကိုစနီကာနဲ့တူတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့တွေ့ဖူးတယ်။ ဒီဇိုင်း၊ ဂရပ်ဖစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပေါ့ပါး။ ကူရှင်ချုပ်နိုင်သော EVA outsole ပါရှိသည်။ အသက်ရှူနိုင်သောဒြပ်နံရံများ။ တစ်နေကုန် ၀ တ်စားဆင်ယင်ရန်လွယ်ကူသောခြေထောက်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မနံပါတ် .: ၅၀၂၆ ကုန်ပစ္စည်းအမည် - အမျိုးသားဒီဇိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်လူကြိုက်များသည့်စနီကာများ - ရက်ကန်း၊ ချည်မျှင်၊ ကုတ်ပြား၊ အတွင်းပိုင်းပစ္စည်း - ကွက်ကွက်ပြင်ပပစ္စည်း - ပေါ့ပါးသောအီဗာတစ်မျိုး။ အမျိုးအစား - flyknit ခြေအိတ်နှင့်တူသောဖိနပ်အရွယ်အစား - ava ...
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ OEM ကျပန်းဖိနပ်အမျိုးသားစီးဖိနပ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်နာ Sneaker လက်ကား China Casual Shoes Fashion Sneaker
သင်တန်းနည်းပြသည်မည်သည့် ensemble အတွက်မဆိုခေတ်မီတိုးတက်မှုကိုပေးသည်။ ဤစွဲဆောင်မှုရှိသောဖက်ရှင်စနီကာများသည်သားရေချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဗိသုကာပုံစံပုံစံ၏တစ်ကိုယ်တည်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ လည်ပင်း။ ဇာ -up, စတိုင်။ အထည်အလိပ်။ ကူရှင်။ ပေါ့ပါးသောဖီးလွန်းဖိနပ် ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မနံပါတ် .: ၅၀၁၂ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်နာနှင့်လက်ကားရောင်းဝယ်သူများနှင့်သင်တန်းပို့ချသူများအတွက်အထက်ပစ္စည်း - နောက်ခံ၊ အ ၀ တ်ကွက်၊ ဒြပ်ပါအချည်အကျီပစ္စည်း - ထည်အစရှိသည့်ပစ္စည်း - အတွင်းခံပစ္စည်း - ရှင်သန်နိုင်သောကွက်ကွက် Outsole ma ...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နွေ ဦး ရာသီတွင်အမျိုးသမီးစီးဖိနပ်နှင့်လိုက်ဖက်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးသမီးဖက်ရှင်ဖိနပ်များ
လည်ပင်းတစ်ချောင်း၊ လူလုပ်အထက်နှင့်ရောင်စုံဇာများပါသော Sneaker တွင်ရပ်ကြည့်ပါ။ ရိုးရာဇာ -up, ပိတ်ပစ်နှင့်အတူဖက်ရှင် Sneaker ။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်အလိပ်နံရံနှင့်ကူခြေလျင်။ Eva midsole, ကြာရှည်ခံရော်ဘာ outsole ကူရှင်သန်ခြင်း။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မနံပါတ် .: 5024 ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အရည်အသွေးမြင့်သောရောင်းအားအသစ်အမျိုးသမီးစီးအင်္ကျီအထက်ပစ္စည်း - စွပ်သားရေ၊ အထည်အလိပ်ကွက်၊ pu နံရံအစိုင်အခဲ - ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းစတီးလ် - ကွက်ကွက်အလွှာ - အလယ်အလတ်အဆင့် - အကာအကွယ် EVA ပြင်ပပစ္စည်း - အကြမ်းခံရော်ဘာလိင် - m ။ ..
အမျိုးသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ရောက်ခါစအမျိုးသမီးများအတွက်ရှူရှိုက်နိုင်သောအမျိုးသမီးဝတ်စုံ Sneaker များအမျိုးသားအမျိုးသမီးဖက်ရှင် Sneaker
ဤရွေ့ကားအသစ်သောကန်ဘောနှင့်အတူသင်၏ရွယ်တူချင်းများထံမှ standout ။ ရောင်စုံနှင့်အားကစား silhouette အတွက်နိုင်လွန်နှင့်နောက်တန်းအထက်။ လုံခြုံမထိုက်မတန်များအတွက်ဇာ -Up ပိတ်သိမ်း။ Padded ကော်လာနှင့်လျှာ။ ရှူရှိုက်နိုင်သောကွက်ကြိုး။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် phylon outsole ။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မနံပါတ် .: 5019 ကုန်ပစ္စည်းအမည် - အမျိုးသမီး ၀ တ်အထူထူသည့်ဖိနပ်ပါ ၀ င်သည့်ကျပန်းအားကစားဖိနပ်အထက်ပိုင်း - နောက်ခံ၊ အသက်ရှူလွယ်သောကွက်၊ ဒြပ် pu နံရံ - spandex ကွက်အတွင်းခံပစ္စည်း - ကွက်ပြင်ပပစ္စည်း - ကြာရှည်ခံရော်ဘာဖိနပ်အမျိုးအစား - lac .. ။
သင်၏စတိုင်ကျသည့်စတိုင်လ်ကိုစနီကာဖိနပ်ဖြင့်စီမံပါ။ Chunky Sneaker သည်အထက်တန်းလွှာနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ရိုးရာဇာ - တက်ပိတ်ထားသောဘေးဘက်သိုင်းကြိုးနှင့်အတူပိတ်ခြေကုပ် silhouette လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းခြေတပြင်လုံးကိုထားရန်။ Spandex ကွက်နံရံနှင့် insole ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ခြေထောက်။ တာရှည်ခံ PHYLON outsole တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသော TPU midsole ပလပ်ဂင်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မနံပါတ် .: ၅၅၂၅ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ဖိနပ်ချုပ်ထားသောဖက်ရှင်စနီကာများအထက်ပစ္စည်း - အရည်အသွေးမြင့်မားသော ...